'Ihe Nketa' zuru oke, dị ize ndụ, nchekasị na-emetụta ihe nkiri
Mbido Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ [SXSW Review] 'Ihe Nketa' zuru oke, dị ize ndụ, nchekasị-na-etinye ihe nkiri
[SXSW Review] 'Ihe Nketa' zuru oke, dị ize ndụ, nchekasị-na-etinye ihe nkiri
by Trey Hilburn III March 15, 2018
by Trey Hilburn III March 15, 2018 995 echiche
Site na nke abụọ Ihe nketa amalite, ị maara na ị nọ maka ihe dị iche. Mbido ime ụlọ nwayọ nke na-abanye n'ime ụlọ nke na-abanye n'ime ụlọ maara nke ọma n'onwe ya, a na-adọta gị na ihe na-adịghị mma. Ọ bụ riptide nke na-ahụ anya nke na-achọ ịdọkpụ gị gaa na oke ọmịiko, oke osimiri.
Akụkọ a na-esote ezinụlọ Graham, onye na-emekọ ọnwụ nna nna ezinụlọ ahụ na nso nso a. N'oge na-adịghị anya olili ozu ahụ, ezinụlọ ahụ malitere ịchọpụta na mgbọrọgwụ nke ndị nna nna ha nwere ike ịbụ nkekọ jọgburu onwe ya.
Ihe nketa bụ mbuso agha dị irè na ndị na-ege ya ntị. Gralọ ezinụlọ Graham bụ ụlọ obibi nke ụlọ a na-eme ka ọ dịkwuo elu, ọ na-adịkarị ka ọ na-egbu ya na ụfọdụ arịa nwere skewed elu ma ọ bụ akụkụ na -emepụta obere mpempe nke enweghị iru ala ụwa ọzọ nke na-arụ ọrụ ugbu a na ị na-ele psyche. Designda imewe bụ mgbe nile binaural usu na-egwuri fọrọ nke nta niile mbụ omume nke ihe nkiri. Ihe abuo ndia mejuputara gi dika ihe ojoo, tupu eme ka ihe ojoo di.
Ihe na-echu m ụra bụ na nke a bụ onye isi, ihe mbụ Ari Aster mere. Nwanyị a ga-ebi ndụ ọtụtụ ndụ dịka onye ndu na mbụ, ọ na-ekpebisi ike na fim ya. Ihe nketa bụ nchegbu dị ize ndụ na-eweta ihe nkiri, Aster na-emepụta ụzọ ọhụrụ, nke na-eyi egwu maka ụdị egwu ahụ.
Ihe nkiri a nwere ike ịdị adị dị ka ihe nkiri ezinụlọ ma ọ ga-adọrọ adọrọ. Aster na-elezi anya ime ka ihe ejije ahụ rụọ ọrụ, ma jiri nwayọ na-ewebata ụjọ na-atụ ụjọ. Ọtụtụ dị ka ịtụkwasị frog n'ime ite ya na ogo nwayọ nwayọ na-arị elu, a na-esighe gị n'ọtụtụ nnukwu ihe osise na echiche dị egwu.
Abụ m onye na-akwado ọtụtụ egwu A24. Ihe nkiri ụdị ikuku dị ka The Witch bụ iko m kapịrị ọnụ. Ihe nketa na-eburu ihe ikuku dị na mbara igwe ma na-agbakwunye ha ike ndọda site na ịbute ụdịdị egwu ndị na-atụ egwu hụrụ n'anya (ee, ọbụlagodi mmụba dị oke egwu) na -emepụta ihe nkiri na-adị ka ọ nwere ike ịmechi oghere nke ikuku na-adịghị ọkụ ọkụ na ndị na-ege ntị na-atụ ụjọ. .
Ihe onyonyo a kpụrụ na ihe nkiri ahụ na-arapara n'isi gị. M ka na-eche banyere ya ugbu a. E nwere ọtụtụ akụkọ eji egwu egwu nwere ọgụgụ isi banyere ịkọ ahụmịhe ahụ ịhapụ gị ọ bụghị naanị ụfọdụ onyogho jọrọ njọ mana ihe ịchọrọ ịla n'ụlọ na nyocha.
Ihe nkedo di n'ime idi uku. Toni Collette na onye ọ bụla nọ n’ezinụlọ ya kpọrọ gị n’aka iji mara ụzọ nke ezi-na-ụlọ tupu ị hapụ ị tufuru naanị gị na enweghị kọmịsa n’ime akụkọ ezinụlọ gbara ọchịchịrị. Collette iru uju na agwa nnukwu ekpughe ọrụ terrifyingly organic na ala.
"Ihe nketa bụ nchegbu dị egwu nke na-eweta ịse ihe nkiri, Aster na-emepụta ụzọ ọhụrụ, nke na-eyi egwu maka ụdị egwu ahụ. ”
Ihe nketa bụ ihe dị oke egwu maka ụjọ na ụzọ ọ bụla. Ọ na-eme ụfọdụ ihe na-adịghị emetụ n'ahụ site n'usoro iru uju na ọnọdụ ezinụlọ wee tụgharịa ha n'ụzọ na-ezighi ezi. Ọ bụ ihe nkiri na-eme mmụọ, ebumnuche ya bụ ịkọ gị ọnụ na ọ rụrụ ọrụ m kpamkpam. Si ebe m na-anọdụ, ọ nweghị ụzọ fim a na-anaghị akwụsị na m n'elu 5 ndepụta na njedebe nke afọ. Ihe nkiri a dị egwu ma enweghị m ike ichere ịnagide ya ọzọ.